जोन्सनको खोप लगाउनासाथ धादिङमा एक जनाको मृत्यु – Dailny NpNews
मंगलबार १२ आश्विन २०७८
ललितपुरको यो ठाउमा छा,’नीछानी युवती, एकपटककाे तीनदेखि १५ हजार
गायिका शान्तिश्री परियारको खुशीले भरिएको सुन्दर परिवार !
बडादसैँको साइत सार्वजनिक, विजयादशमी असोज २९ गते १०ः०२ बजे शुभ
दशैँमा घर जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँको भाडा कति लाग्छ ? [सूचीसहित]
यीनै हुन् नारायणहिटी पसेर राजा हुन्छु भन्दै श्रीपेच लगाउन खोज्ने युवक
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०८, २०७८ समय: १९:४९:३४
काठमाडौ । एक डोज मात्र लगाए पुग्ने अमेरिकाको जोन्सन एण्ड जोन्सन कम्पनीको खोप लगाएपछि एक जनाको निधन भएको छ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा यो खोप लगाएका एक पुरुषको निधन भएको छ । खोप लगाएका वृद्ध ब्यक्तिको निधन भएपछि अनुसन्धान थालिएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको खोप शाखाका अनुसार खोप लगाएर घर फर्किएका ती वृद्धको केही समयपछि निधन भएको हो ।
खोप लगाएको केही समयमा नै उनको निधन भएपछि त्यो कुराको अनुसन्धान सुरु भएको छ । तर उनको निधन खोपका कारण नै भएको हो भन्ने पुष्टि भने भएको छैन । के कारणले निधन भयो त्यसको खोजी थालिएको हो । यसबारे अध्ययन गर्न महाशाखाले एउटा टोली घटनास्थलमा पठाइसकेको छ ।
शाखाका प्रमुख डा। झलक शर्मा गौतमले घटनास्थलमा टोली गएको जानकारी दिएका छन् । खोपकै कारणले वृद्धको निधन भएको हो भनेर अहिले नै भन्न नमिल्ने पनि उनलेब बताए । ,टोलीले अध्ययन गरेपछि मात्र ठोस कुरा भन्न सकिन्छ’ उनले भने ।
टिकटक लाइभ बसेरै लाखौ कमाउने अर्कि युवती पनि मिडियामा (भिडियो हेर्नुस)
२.	यस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ क्या’न्सरको उच्च जोखिम, यस्ता संकेत देखिए जाँच गराइहाल्नुहोस्
३.	७ दिनमै शरिरका मुसा, कोठि गायब गर्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय…
संसार नै छ क्क पार्ने १५ अ चम्मका जोडीहरू (भिडियो)
जापानमा नेपाली युवाले बाटोमै यस्तो गरेपछी परे पक्राउ
“हिमालमा पुगेपछि बिहेको प्रस्ताव राख्नुभो, मैले हुन्छ भनिदिएँ” – इन्दिरा